Wisepowder အဖွဲ့သည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြီးအကျယ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုကောင်းစွာသတိပြုမိသည်။ ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များတွင်ကျူရှင်ဆက်လက်တက်နေသော်လည်းကျောင်းသားများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစုများသည်များသောအားဖြင့်ကျော်လွှားရန်သိသာထင်ရှားသည့်ဘဏ္responsibilitiesာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများထားရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကအဆင့်မြင့်ပညာရေးသည်အရေးကြီးသည်ဟုယုံကြည်ပြီး၊ အခြားသူများအားပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်အခြားသူများကိုပြန်လည်ပေးအပ်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သူတို့၏ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုကူညီရန်ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားသစ်ကိုနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထောက်ပံ့ရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာနှစ်များတစ်လျှောက်တတ်နိုင်သမျှကျောင်းသားများအားကူညီရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာသင်ဆုကိုနှစ်စဉ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပညာသင်ဆုငွေပမာဏ $ 1000 နှင့်၎င်းတို့၏ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တဦးတည်းကျောင်းသားတစ်ယောက်မှချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်ပညာသင်ဆုရရှိရန်လျှောက်ထားသောစာသင်ချိန်အတွက်ယူအက်စ်ရှိအသိအမှတ်ပြုကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်တွင်အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်စာရင်းသွင်းရမည်၊ သို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းရမည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက်လျှောက်ထားသူများအတွက်သင်သည်မိဘသို့မဟုတ်တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိရမည်
4. အနိမ့်ဆုံး 3.0 GPA ရှိခြင်း (၄.၀ အတိုင်းအတာအရ)
၁။“ ဦး နှောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများကမလုပ်နိုင်၊ မတတ်နိုင်သောခေါင်းစဉ်” နှင့်ပတ်သက်သည့်စကားလုံး ၁၀၀၀ ထက်ပိုသောစာစီစာကုံးတစ်ခုကိုရေးပါ။
သင်၏စာစီစာကုံးကို ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၃၁ ရက်၊
လျှောက်လွှာအားလုံးကိုပေးပို့သင့်သည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] သာစကားလုံး format နဲ့။ PDFs သို့မဟုတ် Google Docs သို့ချိတ်ဆက်မှုကိုလက်မခံပါ။
ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာတွင်သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံ၊ သင်၏တက္ကသိုလ်အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖော်ပြသင့်သည်။
6. စာတမ်းကိုသည်းခံမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှဆောင်းပါးကိုသင်ကူးယူကြောင်းတွေ့ရှိပါကသင်၏လျှောက်လွှာကိုချက်ချင်းငြင်းပယ်လိမ့်မည်။
7. အထက်ဖော်ပြပါအချက်များ မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှမပေးသင့်ပါ။
၈။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်နောက်ဆုံးနေ့ပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင်ရေးထားသောတီထွင်ဖန်တီးမှု၊ သင်ပေးထားသောတန်ဖိုးနှင့်ယင်း၏စဉ်းစားဟန်အပေါ်သင်၏အက်ဆေးကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
၉။ အနိုင်ရသူများကို ၂၀၂၀၊ onပြီ ၁၅ ရက်တွင်ကြေငြာမည်ဖြစ်ပြီးအနိုင်ရသူကိုအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားမည်။
သင်၏အလုပ်များကိုကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများမှကျွမ်းကျင်သောလမ်းညွှန်သင်ကြားပေးသောစီမံကိန်းမန်နေဂျာများကအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ privacy ကိုလေးစားပြီးသင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများအားမည်သည့်အခါမျှမထုတ်ဖော်ပါ၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အကျိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းစီမံကိန်းများတွင်သင်၏အကြံဥာဏ်ကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Wisepowder.com ပညာသင်ဆုတွင်သင်၏ပါ ၀ င်မှုသည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ပါ ၀ င်ခြင်းရှိမရှိကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Wisepowder.com မှပညာသင်ဆုအတွက်စဉ်းစားရန်အချက်အလက်များကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်တင်ပြရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏လျှောက်လွှာသည် Wisepowder.com၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်နှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးသည် - လျှောက်ထားသူ၏အမည်၊ ကောလိပ်တက်နေသူ၊ ကောလိပ်ဓာတ်ပုံ၊ အီးမေးလ်၊ ချီးမြှင့်ငွေပမာဏနှင့် Wisepowder.com တွင်သို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်ဆက်သွယ်ရေးအပါအဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ၊ သတင်းလွှာများ၊ လူမှုမီဒီယာများနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်သာကန့်သတ်မထားပါ။
သင်၏လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများရှိပါကသင်၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်၊ သင်၏အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောအသိပေးချက်များပေးပို့ရန် (သို့) လျှောက်လွှာနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်သွယ်ရေးအတွက်သင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
အနိုင်ရသူအားအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းလျှောက်ထားသူအားလုံး၏ရထိုက်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးကြီးသောအချက်အလက်အားလုံးဖျက်ဆီးခံရသည်။ လျှောက်ထားသူများ၏အီးမေးလ်လိပ်စာ (သို့) ဖုန်းနံပါတ်ကိုမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုမည်နည်း။